“Xamar ku Hungoobay oo Nairobi baa Dani I Biday” Kooxdii Xaglatoosiye oo Baxsada – make music movie Edition: International | Video
Published On: 20 November 2010 11:30 pm Wararka | By Taleex Media “Xamar ku Hungoobay oo Nairobi baa Dani I Biday” Kooxdii Xaglatoosiye oo Baxsada
Waxaa galabta magaalada Nairobi soo gaadhay kooxdii Xaglatoosiye ka dib markii ay hungo kala soo kulmeen madaxda dawlada Federaalka Soomaaliya oo teedaba la yaaban.
Xaglatoosiye waxaa safarka ku wehliyey Garaad jaamac Garaad Cali oo todobadkii u dambeeyey ku sugnaa magaalada Muqdisho.Waxaa ay magaalada Muqdisho kaga soo hadhay yaasin tamaad.
Garaadka iyo Xaglatoosiye ma helin soo dhaweyntii ay ka heli jireen jaaliyada Nairobi, waxaa soo dhaweeyey tobaneeyo dhalin yara ah kuwaaso iskood isu soo abaabulay, kooxda ku qudhaabata guddiga jaaliyada Nairobi qof kama tagin garoonka.
Marka laga reebo maxamuud Cali jaamac oo ka mid ah kooxdan khiyaali ku nool ka ah iyo laba oday oo ay qaraabo yihiin xaglatoosiye inta kale ee soo dhaweysay waxa ay ahaayean dhalinyaro ka soo jeeda mandaqada Sool,Sanaag iyo Cayn oo iskoodisu abaabulay ilaa hada ma cadda sababtay rasmiga ah ee ay uga baaqsadeen in ay soo dhaweeyaan Garaadka iyo Xaglatoosiye maadama ay haatan ka hor sawiro xad dhaaf ah la geli jireen iyagoo dejin jiray dhismayaalqaali ah hase ahaate markii u horeysay ayaa Xaglatoosiye iyo Garaad Jamaac waxaa ay ku dageen Hotelku yaala xaafada islii oo aysan horay ugu degi jirin.
Booqashadii Xamar maxa ay kala soo kulmeen?
Kooxdan uu Xaglatoosiye garwadeenka ka yahay waxaa ay tageen magaalada Muqdisho waxa ay dedaaldheerada ahj u galeen in ay lakulmaan raysal wasaaraha Soomaaliya ugu dambeyntiina wa ay heleen in ay la fadhiistaan.
Maxaysa kala kulmeen?
Tooda ( Kooxda Xaglatoosiye)
Haddii aan ku horeyno sida ay taageerayaashooda kooxdani ogu warameyso , waxa ay sheeganayaan in dawlada Soomaaliya ay ugu deeqday saanad militari iyo dhaalo gaar ahaan mushaharka laba kun oo askari iyoin dawlada federaalka Soomaaliya aqoonsatay maamul goboleed uu madax ka yahay Xaglatoosiye.
Qofka sida saxda ah u fekerayaa waa uu dareemi karaan maanta xaalada ay ku sugan tahay dawlad federaalka iyoin ciidamadeeda baah dirteed ku kaliftay in ay hubkii loogu deeqay ay ka iibinayaan kooxaha kasoo horjeeda,suaasha is weydinta mudan ayaa ah may dawladu dhaqaalahaas isaga celiso kooxahan ku xaynd daaban Villa Somalia.
Tan Rasmiga ah
Ilo muhiim ah oo ku dhaw dhaw raysal wasaare Farmaajo ayaa Taleex Media u xaqiijiyey in kooxda xaglatoosiye la kulmeen raysal wasaaraha.
Raysal wasaare Farmaajo ayaa ah nin aad ulasocda siyaasada beelaha SSC maadama ay reer abti u yihiin waxaana uu si wanaagsan u soo dhaweeyey wefdiga garaad jamaac isagoo ka dhageystay warbixintooda isla markaana waxa ay raysal wasaaraha u gudbiyeen qoraal muujinya nidaam dawlad goboleed ah oouu madaxweyne ka yahay Xaglatoosiye.
Kooxdan waxaa seegtay in Raysal wasaaruhu ka dharagsan yahay xaalada rasmiga ah ee beelaha SSC, muxuu hadaba u ku yidhi?
Raysal wasaare Farmaajo ayaa u sheegay kooxdaa in dawladiisu soo dhaweyneyso dedaal kasta oo wax loogu qabanayo degaamada SSC balse ay laga maarmaan tahay in la helo midnimada beesha isla mar ahaantaana kula dardaarmay in ay fikirkan kula laabtaan isimadii kale ee beesha SSC.
ugu dambeyna Farmaajo ayaa u sharaxay kooxdaasi in beesha SSC ka mid tahay Puntland habka ay uga bixi kartana ay tahay beesha oo wada jirta hadalkaana waxaa uu yimi mar uu Garaad jamaac yidhi in ay Puntland iyo Somaliland midkoodana ahayn oo ay ka madax banaan yihiin.
Displaying 1 Comments Have Your Say xog-ogaal says:	November 21, 2010 at 11:38 am	walee kooxdaan cago-bara ayaa dilay. Bal inta ay xaasidnimo meel walba u mareen ilaa xamar oo maydka la kala gurayo ay naf bideen.
Aaway laascaanood iyo dhul maqan ayaan xoraynaynaa ma buuhoodle ayaa laascaanood noqotay!!!!!!!!11